Qoraalka CHPW ee Dhacdooyinka Afgaanistaan ​​- mareegaha blog -ka rasmiga ah ee CHPW Awoodda beesha Barta rasmiga ah ee CHPW
Qoraalka CHPW ee Dhacdooyinka Afgaanistaan
Community | 23 -ka Ogosto, 2021
La dhajiyay Ogosto 23 -keedii, 2021 - Waqtiga Wax Akhrinta: 3 Daqiiqad / s
Hadda waxaa la joogaa waqtigii aan u adeegsan lahayn naxariista ugu weyn ee qaxootiga, oo aan gaarsiin lahayn qaxootiga ama muhaajiriinta ku dhex nool bulshooyinkayaga u baahan kaalmada.
Markaan daawaneyno dhacdooyinka ka dhacaya Afgaanistaan, qalbiyadeena waxay u hibeysaa dadka reer Afgaanistaan ​​iyo dhammaan dadka geesiyaasha ah ee la kulma khasaare aad u weyn - hadda iyo inta lagu jiro taariikhda dheer ee dagaalka Afgaanistaan.
Ameerikaan ahaan, waxaan aqoonsannahay doorka gaarka ah ee waddankeennu ku leeyahay masiibada murugsan ee aan aragno. Urur ahaan waxay ku furantahay daaqad cusubu heellan xuquuqda aadanaha ee dadka oo dhan - oo ay ku jiraan bulshooyinkayaga soo -galootiga iyo qaxootigu - waxaan taageernaa dhammaan dadaallada lagu bixinayo deked ammaan ah oo ku habboon dadka Afgaanistaan ​​iyo qoysaskooda oo khatar weyn ku jira taas oo ay sabab u tahay taageeradooda iyo kaalmaynta ciidamada milatariga Mareykanka ama dhaqdhaqaaqyada kale ee xuquuqda aadanaha.
Hadda waxaa la joogaa waqtigii aan u muujin lahayn naxariista ugu weyn ee kuwan iyo dhammaan qaxootiga, iyo in aan gaarno qaxootiga ama muhaajiriinta ka tirsan bulshooyinkayaga u baahan kaalmada.
Sidee ayaad ku caawin kartaa
Taageer Wada -hawlgalayaasha Washington ee CHPW
Haddii aad jeceshahay inaad caawiso, kuwa soo socdaa waa qaar ka mid ah Shuraakada Washington ee CHPW oo la shaqeeya Muhaajiriinta & Qaxootiga:
Xarunta Kaalmada Muhaajiriinta ee Kitsap (KIAC). KIAC waxay u shaqaysaa waxay ku furantahay daaqad cusubfayoobaanta iyo xoojinta muhaajiriinta iyada oo loo marayo waxbarashada, u doodista iyo caddaaladda bulshada.
Adeegyada Bulshada Lutheran NW. Ururku wuu qaadanayaa waxay ku furantahay daaqad cusubtaageerada qaxootiga imanaya Waqooyi Galbeed.
Hooyo Afrika. In kasta oo magacoodu sharxayo taageeradooda qaxootiga Afrikaanka ah iyo dumarka soo -galootiga ah iyo qoysaskooda, barnaamijka Carruurta Barwaaqo -sooranka ee Hooyo ayaa sidoo kale waxay ku furantahay daaqad cusubwaxay taageertaa haweenka uurka leh ee Afgaanistaan ​​iyo carruurtooda.
Isbahaysiga Haweenka Qaxootiga (ReWA). ReWA waxay caawisaa qaxootiga Afgaanistaan ​​waxayna bixisaa waxay ku furantahay daaqad cusubsaddex wax oo aad hadda samayn karto si aad u caawiso.
Ururo dheeraad ah oo ka tirsan Gobolka Washington si ay u taageeraan
Waa kuwan qaar ka mid ah ururada Gobolka Washington ee dheeraadka ah ee caawiya Muhaajiriinta & Qaxootiga, oo ay ku taliyeen Seattle Times iyo/ama Shabakadda Midnimada Muhaajiriinta Washington:
Guddiga Badbaadinta Caalamiga ah (IRC). Ururku wuxuu leeyahay Facebook waxay ku furantahay daaqad cusubbogga deeqda ee qoysaska dhowaan yimid Washington. Iyaguna way hayaan waxay ku furantahay daaqad cusublaba kulan oo xog -ogaal ah fursadaha iskaa wax u qabso ee soo socda Sebtember 7 iyo Sebtember 10. Waxay kaloo leeyihiin sharrax waxay ku furantahay daaqad cusubwaxa ka socda Afgaanistaan kaas oo la daabacay badhtamihii Ogosto.
IRC waxay kaloo ku talineysaa taageeridda:
- Hindisaha Caafimaadka Afgaanistaan waa mid aan macaash doon ahayn taas waxay ku furantahay daaqad cusubwax ka qabtaa farqiga u dhexeeya caafimaadka bulshada Afgaanistaan. Waxay kaloo haystaan ​​sanduuq cunto iyo barnaamij ka-hortagga ka-saarid, wayna aqbalaan waxay ku furantahay daaqad cusubdeeqo.
- Jaaliyadda Mareykanka ee Afgaanistaan ​​ee Washington waa hay'ad aan macaash doon ahayn oo ku salaysan diin waxay ku furantahay daaqad cusubwaxay ku dadaaleysaa inay “kor u qaaddo danaha bulshada Afgaanistaan ​​dhammaan dhinacyada baahiyaha dhaqan, diimeed iyo bulsho,” sida ku cad mareegtooda. Way aqbalaan waxay ku furantahay daaqad cusubdeeqo iyada oo loo marayo PayPal.
Seattle Relief Seattle. World Relief waxay ku talineysaa in wax laga barto waxay ku furantahay daaqad cusubsida loogu jawaabo loona taageero dadka ka imanaya Afgaanistaan. Way aqbalayaan waxay ku furantahay daaqad cusubdeeqo iyo kaararka hadiyadda ee Target, Safeway, Amazon iyo Fred Meyer, oo lagu soo diri karo: World Relief Seattle 23835 Pacific Highway S. Suite 100, Kent, WA 98032
Laanta Socdaalka iyo Adeegga Qaxootiga (LIRS). LIRS waa waxay ku furantahay daaqad cusubraadinaya mutadawiciin aagga Seattle iyo Tacoma si ay gacan uga geystaan ​​soo qaadista gegida dayuuradaha, dejinta guryo, hagid, umeerin ama cunto u keenista dadka cusub. Iyaguna way aqbalaan waxay ku furantahay daaqad cusubdeeqo.
Adeegga Qoyska Yuhuudda (JFS). JFS waxay u hoggaansantay a waxay ku furantahay daaqad cusubLiiska rabitaanka Amazon, inta badan alaabta guriga ee loogu talagalay dadka cusub. Iyaguna way aqbalaan waxay ku furantahay daaqad cusubdeeqo. Ururku wuxuu kaloo raadinayaa kuraasta cusub ee baabuurta ee qoysaska leh carruurta yaryar.
Diocese ee Xafiiska Dib -u -dejinta Qaxootiga ee Olympia. waxay ku furantahay daaqad cusubTabarucayaashu way is qori karaan si loo baro Ingiriisiga, la -taliyayaasha dhallinyarada iyo maareynta kiisaska. waxay ku furantahay daaqad cusubDeeqaha waxaa lagu samayn karaa JustGiving.
Ururka Muslimka ee Puget Sound (MAPS). waxay ku furantahay daaqad cusubIsku qor si aad u sii wadato hawsha oo aad wax uga ogaato fursadaha aad wax ku qaban karto. waxay ku furantahay daaqad cusubDeeqaha waxaa loo samayn karaa in lagu taageero qoysaska Afgaanistaan ​​ee dhowaan yimid.
« Aan Talaalno! Ilmahaaga ka dhig mid caafimaad qaba oo ammaan ah 2021
Wada -hawlgalayaasha Xarunta Caafimaadka Bulshada: Horumarinta Sinnaanta & Helitaanka »